Iindawo eziphezulu ze-11 ze-Ski socks zokugcina iiNyawo ezomileyo kunye eziNzileyo
I-11 ze-Ski Socks for Comfort
Ngokuziqhelanisa ne-ski boot kunye nepropati ezikhuselayo kwiinkampani zendalo okanye ezenziwe ngamacwecwe, ukufudumala akusisona simbopheleleko esiphezulu samasokisi esinqabileyo.
Kuninzi okwenzelwe ukwenza iibhothi ze-ski kunye ne-tight water, ukugcina umoya uphazamise kunye neqhwa elikhutshwe kwiinyawo zakho. Oku kuye kwabanikezeli abakhiqizi abanamahloni amaninzi ukuba bajonge izinto eziphathekayo kunye nokuyila ukuhlangabezana neenjongo ze-ski sock zanamhlanje - gcina unyawo olukhululekile, ugcine unyawo olumile, kwaye unike iinyawo zakho amandla okuziva ukulinganisela kweebhotshi zakho ze-ski and bindings.
Nanku ukujonga kwezinye iisensi ezihamba phambili ze-ski ezikhoyo namhlanje kuquka iisokisi zokuxinwa eziphunyeziweyo ezenziwe ukuba zigcine imilenze yakho ibe yintsha xa igqiba iiphakamiso njengoko zazikho kwisihlalo sokuqala.
Rohner Ski Socks
Rohner Carving L / R.
Unjalo, ngokuqinisekileyo uqhelane nedumela laseSwitzerland lokugqwesa kunye nokuchaneka kwi-watchmaking. Ewe, ngoku unako ukuvuka kusondele kunye neyakho kunye nekhwalithi efanayo yaseSwitzerland eya kwi-sock making.
URohner, oneminyaka engama-80 ubudala ubudala waseSwitzerland owaziwayo ngegama eliqinileyo kulo lonke elaseYurophu ngoku enze iimveliso zabo zifumaneke apha e-USA kunye neeskrini zabo ze-ski ne- snowboard ziyaqinisekiswa ukuba zibethe. I-Carving L / R yi-ski kunye nokukhwela i-sock eyakhiwe ngendlela eyenziwe ngamanqabana anqamlekileyo kunye nesekunene, kunye ne-thermo elawulwa ngamashishini okuphucula umoya kwindawo yenyawo kwaye iqhutywe ngokukhawuleza kwi-shin ne-upper ankle ndawo.
Iqoqo lonke leRohner, okuquka imodeli yokukhanya kunye nohlobo lwezobuhlanga yinto esemgangathweni kwaye xa uzama uthanda ukuba babekho ngaphambili. Kodwa uRohner iisokisi zekhefu zikhoyo ngoku - kunye nangaphezulu kwexabiso elifanelekileyo.
Falke Austria SK5 Uhlanga lwe-Ski Sock
Ukususela ngo-1995 u-Falke usebenzisana ne-Austrian Ski Federation ukubonelela ngeesokisi ezisezingeni eliphezulu zeemfuno zokusebenza eziphezulu kwaye ngokuqinisekileyo uye wenza umsebenzi ophumelelayo ngokomlando kwiinyawo zase-Austrian ski racers.
I-soke ye-Falke SK5 ye-skick sock yindawo encinci ye-sock efanelekayo, ilungele abantu abaxhasi, abaqeqeshi kunye nabantu abafuna ukuvakalelwa ngakumbi kwiibhuthi zabo. Sock ekhululekile kwaye ephefumulayo ine-silk ukuhlanganiswa ngokufudumele kunye ne-Thermolite ukunciphisa ukulahleka kobushushu kwiinyawo.
I-anatomically ibeka iindawo zokukhupha iindawo zokukhupha izitshixo zoxinzelelo kwi-shin, i-ankle kunye nesithende ekunikezeni induduzo yonke imihla. Kaninzi "
Zensah Tech + Uxinzelelo lweeSocks
Zensah Tech + Uxinzelelo lweeSocks. Zensah
Iisensi zokunyanzelisa i-Tech + Zensah zivela kwimibandela eyahlukileyo ebeka ukuphoxisa. Ukuba usetyenzisiwe ukugqoka ukuxutywa komnyama omnyama, le mibala iya kukuvusa kwaye yenza ukuba ujonge phambili ukuya ekhephu.
Ngoku kuthethwa ngokobuchwephesha, i-Zensah Tech + Compression yakhiwa ngenani leedaliti ezingama-200, idolo liphakame kwaye lingagxininisi, okwenza i-sock enamandla kakhulu.
Iisokisi zoxinzelelo lweZensah zisebenzisa ukunyanzelisa okugqityiweyo ukuphucula ukujikeleza kwegazi kunye nokuqhuma kwe-oksijini ukwenzela ukwandisa ukusebenza kwezemidlalo ukwenzela ukupheka kweqhwa elide kunye nelincinane. Kaninzi "
Iindawo ze-Ski 6
I-Point6 - njengoko ku-98.6 - ukushisa komzimba okufudumeleyo, iisoksi ezifudumeleyo zinceda ukugcina, isiskiti se-ski sifike ekukhanyeni kwe-ultra light, light and medium and all OTC. Ndifumene ukuba ngaba i-OTC ngokwenene - phezu kwethole - akukho ukukopela, okulungileyo kwaye kudala ukuhlala yonke imini. Ezi zi-non-itch i-merino yool kunye ne-cushioning eyongezelelweyo kunye ne-shin-ngokumalunga ne-ultra-light, light or medium models.
Yenziwe ngee-merino ze-merino ezigqwesileyo ezinobungqingili kunye nenani eliphezulu leenaliti lenza ukuba kulungiswe ngaphezulu nge intshi kunika i-sock eninzi, eqinile kunye nokufudumala okukhulu. Ngokuqinisekileyo ndabathanda kangcono emva kokuhlamba, mhlawumbi ngenxa yokuba ndibagibela ibhola.
I-SmartWool Skiing Ultra LT
I-SmartWool Skiing Ultra LT yindawo ehamba phambili, engeyiyo yokunyakaza kunye ne-toe flat ande evumela ukuba uzive ngokupheleleyo kwi-ski boot. Ndiyithande i-thin, ayikho i-padding ivakalelwa kwiinkampani ze-foam zangasese kodwa ziboniswe kwangaphambili-akukho nto yokukhangela. Ngamashishini angamaxabiso alindele ukuba into izalise nayiphi na i-voids encinci.
Ukuba uthanda iibhothi ezikufutshane, lo yi-SmartWool sock kuwe. I-SmartWool iyazibuyisa, kwaye ngokufanelekileyo, ngenxa yokubuyiselwa kwakhona koboya beboya xa uboya bebucatshungulwa kakhulu kwaye amanzi alondoloze ukusetyenziswa njengempahla eninzi yeebhotshi zamathambo ezinje.
I-CEP ye-Skiing Compression Sport Socks
I-CEP ye-Skiing Compression Sport Socks. Medi-USA
I-CEP I-Skiing Compression Sport Iisokisi zenzelwe ukubonelela ukunyanzelisa i-gradient ukwandisa ukuhamba kwegazi nokunciphisa ukukhathala komlenze ngelixa ukukhwela okanye ukugibela ukulungiselela usuku olude kunye nolonwabo kwiindawo ezisentabeni. I-CEP ye-Skiing Compression Sport Socks yenziwe nge-91% i-Polyamid, i-9% i-Elasthan kwaye ilinganiswe ne-12-16 mmHg.
I-Farn Men's Fough I-Fang Ngaphezulu-I-Inkomo I-Ultra-Light
I-Fang Amadoda Ngaphezulu-I-Inkomo I-Ultra-Light. Darn Tough
Izikhonkwane ze-Vermont Darn Tough zinokuba negama elikukhumbuza ngamanyathelo omanyano kunye neesisiti ezilukhuni zeeboya ezinobomvu obomvu kodwa uqiniseke ukuba, aba bahlali bakho bashushu beenyawo.
I-Darn Tough i-socks ye-ski i-ultra-light but still dense socks ehlanganiswe kwisizukulwana esitsha seMicrosoft yokukhwela imishini ukuvelisa i-soino ye-Merino ye-sock enikezela ukukhupha ukukhupha ixinzelelo ukusuka ekuqhubeni phambili, i-buckles, kunye ne-straps.
I-Darn Tough yenza iisiski ze-ski amadoda, amaqabane kunye nabantwana ekukhanyeni okuphezulu okanye ekhuniweyo kunye ne-gauge ye-gauge ye-Merino i-wool iyayifaka, ayiyikutshixa kwaye ihambisa umswakama okhunjini ogcina iinyawo zomile kwaye zifudumele. Eyona nto: ukuba iibhothi zakho zihamba kakuhle kwaye iinyawo zakho ziyafudumala, ekupheleni kosuku, usenagquma. Kaninzi "
DeFeet Talon Ski Socks
I-Talon yi-sock ye-thinnest kwisiqwenga seDeFeet kwaye isenziwa kwi-CoolMax®. Udidi lomncintiswano luqala i-Talon luya kuhambisa zonke izinto ngokucacileyo ukusuka ezinyaweni ukuya kwi-boot. Ndifumene le sock yayiyeyona nto ifanelekileyo kulezo zibhokisi nge-liner yobukhohlakeleyo kwaye yasebenza kakhulu kum. Baya kuza kubafazi abathile.
Ulwaphulo lwe-skiing line of socks lwaphuhliswa kunye negalelo leqonga leNdebe yeHlabathi . Zonke iimodeli zenzelwe i-No-slip cuffs phezulu, i-breeder Aireator mesh ejikeleze indawo yethole yokuxubha umswakama, kwaye yonke into ayifakekanga kwi-toe pocket.
Izintambo ze-ski zeLalpen ziquka iTeknoloji yoLuhlu lweZixhobo-ezintathu zihlanganiswe ngentambo. Uluhlu lokuqala, i-PrimaLoft Eco-Polyester, luyenzela ukusebenza nokuthuthuzela. Uluhlu oluphakathi, i-Merino Wool, ukucoca umswakama ngexesha lokubonelela. Ingqongqelo yesithathu, iNylon i-fibylon yenyoni igxile kwizwane, isithende ne-shin apho i-sock ifumana khona.
Ukungaxhalabisi, iTeknoloji yeTyala yokuLungisa ayilingani nakwi-sock eninzi. I-Ski Superlight isebenza ngokukhululekileyo kwiinkampani zangokwezifiso.
I-Smartwool ye-PhD ye-ski sock ithatha amasokisi kwinqanaba elitsha. I-PhD ine-4-Degree Fit System yokusebenza kakuhle, ukufudumala nokuqina. Uboya be-merino bukhuthaza ukulawula ukushisa, ukunyusa umthunzi, nokulawula iphunga. I-sock ihambelana ne-calf, i-78% yoboya, i-21% ye-nylon, i-1% i-elastic, kunye nokukhutshwa okuphakathi.
Iisokisi zeTeko zobugcisa ezenzelwe i-teko zikunika yonke induduzo ye-skiing kunye nokusebenza-uyayidinga, kwaye emva koko. Ukudibanisa iifayili ezintle ezivela kwi-fibers eco-friendly kunye nemigangatho ephezulu yokusebenza kubangela ukuba unqamle unyawo lwakho "njengeglavu."
Iisokisi zincinci kwaye zinyusa, kwaye iisokisi ezihamba phambili zilungele ukuba nabani na abanezintambo ze-ski boot liners.
Kuphi ukuthenga izambatho ze-Ski
Ngaphambi kokuba Uthenge iiClubs zeGolf
Yiyiphi i-Harning Harness You Need?
Indlela Yokunikezela Ngayo Impahla Yesikolo esetyenziswayo
Ngaphambi kokuba Uthenge iClubs yakho yokuqala yeeGlabhu
Ukudibanisa iIrons: I-Intro ye-Golf Beginners
6 Classic Bible Epics
Ukujonga Abenjani AbaHleli abahlukeneyo kwiNdaba yeeNdaba
I-National Negro Business League: Ukulwa noJim Crow ngoPhuhliso loQoqosho
Imfazwe yaseRichmond Ngexesha leMfazwe yaseMelika
Izipho eziNtshontsho Izipho ezinokuthethelela kubaculi
Australia Records Records
Yintoni i-Twin Paradox? Ixesha Eliqhelekileyo Uhambo
Ukukhupha i-Stuck Pull-Qala intambo kwi-Nitro RC
I-Chief of Artillery yaseGeorge Washington: Omkhulu uGeneral Henry Knox
"Awunamdla," Inkcazo yeBomedic Bombing
Izilwanyana zeSizwe seNtaba yeRoyy
Iimifanekiso ezingcono kakhulu ezingabonakaliyo kuma-movie abantwana
Ukufaka ii-Clipless Pedals
Iziphumo ezigqwesileyo kwiiSUV ezintsha, iiCrossovers kunye ne-Minivans
KwiiWebhsayithi zeMathenesi kwiIndaneti
I-9 Eninzi Intshutshiso